China Yaskawa Spot Welding Robot SP210 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Inkcazo yeRobot yeWelding Welding
Inkqubo ye- Yaskawa indawo yokuwelda iirobhothi Inqwelo-mafutha-SP210, Ii-axis ezi-6 ezimileyo nkqo zamalungu amaninzi yenza irobhothi ibhetyebhetye kwaye kube lula ukwenza iintshukumo ezininzi. Ehambelana nolawulo olutshaikhabhinethi YRC1000Yirobhothi esebenza kwimisebenzi emininzi enobuchule obuphezulu bokuvelisa. Ukuba i-arc ye-welding isetyenziselwa i-shaft welding, amandla abasebenzi abaphezulu kakhulu, ukungqinelana kwemveliso kubi, kwaye ukusebenza kakuhle kuphantsi. Emva kokuba indawo yokusebenza ye-welding ngokuzenzekelayo yamkelwe, umgangatho we-welding kunye nokuhambelana kwemveliso kuphuculwe kakhulu.
6 210Kg Ubukhulu: 2702mm ± 0.05mm
1080Kg 5.0kVA 120 ° / umzuzwana 97 ° / umzuzwana
115 ° / umzuzwana 145 ° / umzuzwana 145 ° / umzuzwana 220 ° / umzuzwana
Indawo iwelding robot SP210 yenza welding indawo ukusebenza ngokungqinelana nezenzo, ukulandelelana kunye neeparameter ezichazwe yinkqubo yokufundisa, kunye nenkqubo yayo iyasebenza ngokupheleleyo. Kwaye le robhothi yandisa uluhlu lwentshukumo ye-R axis (ukujikeleza esihlahleni), i-B axis (ukujija isihlahla), kunye ne-T axis (ukujikeleza isihlahla) xa ifakwe umpu we-welding. Inani lamachaphaza kwirobhothi ngalinye lonyukile, kwaye ukusebenza kwemveliso kuphuculwe kakhulu.
Inkqubo ye- indawo iwelding indawo yokusebenza yeerobhothi ibandakanya inkqubo yolawulo, umqhubi, kunye nezinto ezilawulayo ezinje ngeemoto, indlela yoomatshini, kunye nenkqubo yomatshini wokuwelda. Ingawugqiba umsebenzi wokuwelda ngokuzimeleyo, okanye inokusetyenziswa kumatshini wokuvelisa ozenzekelayo njengenxalenye yenkqubo yenkqubo yokuwelda, ukuba ibe "sisikhululo" esinomsebenzi wokuwelda kumgca wokuvelisa, ukukhulula abasebenzi nokwenza imveliso ibe lula kwaye isebenze ngakumbi.
Egqithileyo Yaskawa indawo yokuwelda iROTOT MOTOMAN-SP165
Okulandelayo: Yaskawa ukuwelda irobhothi AR1730
Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphatha ingalo yeRobot, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,